အရူးအတွေး (ကျူးး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အရူးအတွေး (ကျူးး)
အရူးအတွေး (ကျူးး)
Posted by uncle gyi on Apr 16, 2015 in My Dear Diary, Think Tank | 24 comments
ရူး အ တွေး
ဟိုနေရာကကျူးတွေ အဲဒီနေရာကိုပြန်ရောင်းနေတယ်ဘာစာချုပ်မှမပါ
ဒီနေရာကျူးတဲတွေရှင်း နေစရာမရှိလို့ကျူးတာ နေစရာအစားပေး
View all posts by uncle gyi →
ကိုယ်​က ကျူး ကိုယ့်​ဒူးကိုယ်​မယုံရတဲ့ ။ ကျုပ်​တို့​တော့မကျူးရဲပါဘူးဗျာ ဗမာပြည်​အုပ​ဒေက ၂မျိုးထဲ ရှိတယ်​ဗျ ။
.ကျူးကျော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ တစ်ရွာလုံးနဲစ့်တစ်ယောက် ဖြစ်တော့မှာပဲ…
.ဖြစ်လဲ ဖြစ်ပစေ…. ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာတော့ ပြောကိုပြောရမယ်….
.ဥပမာ ကျုပ်ဆီက ပစ္စည်းတစ်ခု ကို တစ်ယောက်ယောက်က ခိုးယူလုယူထားတယ် ဆိုပါတော့
.အဲဒါ တစ်မိနစ်ကြာသည်ဖြစ်စေ နှစ်တစ်သန်းကြာသည်ဖြစ်စေ ကျုပ်ပစ္စည်းက သူ့ပစ္စည်းဖြစ်မသွားရပါဘူး….
.အခု ဒဂုံဆိပ်ကမ်းက ကျုပ်မြေကွက်ထဲ + ကျုပ်မြေကွက်ရှေ့ ၀င်ကျူးသူတွေ နှစ်တစ်သန်းကြာလဲ သူတို့မြေ မဖြစ်ရပါဘူး..
.သူတို့ဟာ သူများပစ္စည်း သူများအခွင့်အရေးကို ကျူးလွန်လုယက်သူတွေပါ
.သူတို့ဟာ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်သားတွေပါ….
.အဲဒါကတော့ ကျုပ်အတွက်တော့ အင်မတန်ရှင်းလင်းတဲ့ သဘောထားအမြင်ပဲ..။
.လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့
.အကြောင်းပြချက် တစ်ခု သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်သန်းပဲ ရှိနေပစေ
.အဲသည်အကြောင်းပြချက်ကိုကိုင်စွဲပြီး သူများအခွင့်အရေးကို ကျူးလွန်လုယက်ခွင့်မရှိစေရပါဘူး……
.အဲဒါဟာ လူမျိုးနွယ် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တည်တံ့အောင် စောင့်ရှောက်မယ့် လူ့စည်းကမ်းပါပဲ…။
..လောကမှာ ဆင်းရဲသားတွေကို သနားတတ်သူတွေရှိတယ်
.သူများမြေကို ကျူးကျော်တာကို (ပိုက်ဆံမပေးရတိုင်း) အလကားမတ်တင်းထောက်ခံမနေသင့်ဘူး….။
.ဘရာကြော်ပါ အန်ကယ်ကြီး။ အဲဒီကျူးတွေကို ကျမ အသေမုန်းတာ။ ကိုယ်တိုင်ခံလာရလို့။ တရားဥပဒေကိုတော့ နားမလည်ပေမယ့် သာမန်အသိအရတော့ ကျူးတွေ မကောင်းဘူး။ ကိုယ်က စေတနာနဲ့ခေါ်ထား။ ၁၀ နှစ် ၁၀မိုးလောက် အိမ်လခ မပေးရဘဲ အလကားနေလာရတဲ့ အပေါ် ဘာကျေးဇူး မှ မတင်တတ်ဘဲ ပြန်လူဝါးဝကြတာ။ ဒီဥပဒေတွေက ရှုပ်တယ်။ ကန့်ကွက်စာ တင်ထားရတယ်။ မတင်ထားရင် သိပ်မလွယ်ဘူး။ အဲဒီ ဥပဒေတွေ အရင်တုန်းက ဖတ်မှတ်ခဲ့သေးတယ်။ အခု အန်ကယ်ကြီး ပြောသလောက် မရှင်းလင်းဘူး။
လယ်​လုပ်​သူ လယ်​ပိုင်​ရမယ်​ ဆိုလား
မတရား ဥပ​ဒေ ပြဌာန်းဖူးပါသတဲ့
ထိုစဉ်​က ချစ်​တီး​တွေ ဆီက​ဘိရုမာ လယ်​သမား​တွေလယ်​ပြန်​ရ​အောင်​
တဖက်​သတ်​ ​ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဥပ​ဒေလို့ သိရပါတယ်​
​နောက်​ပိုင်း သည်​ဥပ​ဒေကို အဆိုးယ အစဉ်​အဆက်​ မပြင်​ကြ​လေ​တော့
မြို့​နေ ဘိရုမာတ​ယောက်​ နယ်​ဘက်​မယ်​ခြံဝယ်​ ပိုင်​ရှင်​​ဟောင်း​တောင်​သူကို
လက်​လ်ျြွှဲ မ​ရောင်းမချင်း ဆက်​လက်​​နေထိုင်​စားခွင့်​​ပေးထား
ဂလိုနဲ့ ဆယ့်​​လေးငါးနှစ်​ကြာလာ ​ဈေး​တွေတက်​လို့​ရောင်းမယ်​ဆို​တော့
ချစ်​တီးဥပ​ဒေ နားလည်​​နေတဲ့ ​တောသားက ​ကျေးဇူးကန်းပြီးလူပါး​တွေဝ ​လေသံ​တွေမာ
ကျုပ်​တို့ဆီမယ်​ ဂလို ​ခြောက်​တလွဲဥပ​ဒေ​တွေ တပုံကြီးပြင်​ဖို့ကျန်​​သေးတာရယ်​
ဒါ​တောင်​ကျူးမဟုတ်​​သေး ကျူးက​တော့ ဆိုဖွယ်​ရာမရှိပြီ
တကယ်​​တော့ ဆင်းရဲတယ်​ဆိုတာ စည်းကမ်းဥပ​ဒေ ချိုး​ဖောက်​ဖို့ လိုင်​စင်​ရထားတာမဟုတ်​
စားစရာမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသား ကျူး တွေ အတွက် စံနမူနာ ယူစရာ ထိပ်ခေါင် ကျူး များ ရှိနေတာ မို့
သူတို့ကို အရင် ဥပဒေ နဲ့ တို့ လိုက်ဖို့ ပို ပြီး မသင့်ပေဘူးလား။
ဒီလို နိုင်ငံမျက်နှာဖုံး ကျူး တွေ ကိုတော့ ဘယ်သူမှ အပြစ်မပြောရဲ ၊ ဖယ်ခိုင်း ဖို့ မထောက်ပြရဲဘူး။
ခေါင် အရင်လုံ မှ အောက်ခြေ ကို ထိပါလေ။
ကိုယ့်ကိုတက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရဆိုတာကို.. ကိုယ်ကဘာမှ”ဥပဒေကြောင်း”အရ.. ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ထားတာမရှိရင်.. သဘောတူမျှတယ်လို့..သတ်မှတ်တဲ့ဖက်ရောက်သွားမှာလို့ထင်တယ်..။
ဒီလိုနေရာမျိုးမယ်.. ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားမှုကို.. လစ်လျှူရှုရပါတယ်…။
သဘောက.. ၂၀၀၈ မှာ.. နာဂစ်ထဲ..အခြေခံဥပဒေအတင်းအတည်ပြုတာကို.. လူထုက… နာဂစ်ကြီးရဲ့အရိပ်ထိုးနေတာနဲ့.. စိတ်တွေေ၀၀ါးနေပြီး… မဲမပေးပဲနေလိုက်တာ….
… ၂၀၁၀မှာ.. အားလုံးပါနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာကို.. ဒီချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ပဲ..သပိတ်မှောက်တဲ့အမှားကြောင့်..အခုထိ..လုံးလည်လိုက်အောင်.. ပြန်ဖြည့်(ပြန်ဖြည့်) နေရတာလို့ပဲ.. ပြောချင်..။
….ခြင်္သေ့ကြီး.. ဦးဝင်းတင်မှားချက်ကယ်… နာ…လို့..။
ယူအက်စ်မှာလည်း.. ကျူးတယောက်က.. နေရာတနေရာ..အိမ်တအိမ်မှာ.. ၅နှစ်ထက်ပိုနေနိုင်(နိုင်)နေရင်.. နှင်လို့မရတော့ပဲ.. သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့… ဥပဒေရှိတယ်မှတ်မိတယ်..( ပိုသိသူများထောက်ပြပါ)
ကျူးလာရင်.. ပိုင်ရှင်ကအားမနာပဲ.. ချက်ချင်းနှင်ရမယ်လို့… ထင်..။
အဲဒီ”အားနာပါတယ်”…ဆိုတဲ့ ဗမာတွေစိတ်ထဲက”ကျူး”ကို.. အရင်ရှင်းကြ..။
ပြည်နယ်တခုနဲ့တခု.. နှစ်မတူပေမယ့်.. အများအားဖြင့် ၅နှစ်ပဲ..။ အောက်မှာ Bold လုပ်ပြထားတဲ့..နယူးယောက်မှာတော့.. ၁၀နှစ်ဆက်တိုက်…တဲ့.။
မဒွေါနက.. အဲဒီအပါ့မန့်ကို.. ၁၉၉၀ကနေ ၂၀၀၃အထိ ဒေါနယ်ကိုအသိမပေးပဲဝင်နေနေတာကို.. ဒေါနယ်သိတော့..တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်ပြီးဖယ်ခိုင်းတယ်..။
တရားရုံးက.. ဒေါနယ်လျှောက်ထားတာကိုပယ်ချပြီး.. မဒွေါနကို..အဲဒီသူနေတဲ့နေရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်..။
စိတ်ဓာတ်တွေ မပြင်ကြသရွေ့ ဝေးနေဦးမည် ဝေးနေဦးမည်
အိမ်ငှားဘွကနေ ငှားထားတဲ့အိမ်ကို သူ့ အိမ်ပါဆိုပြီးး
အိမ်ရှင်က ခေါင်းနဲ့ ဆင်းပေးရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ နေရာတိုင်းမှာ မရိုးရအောင် ကြားနေရတာ စိတ်ဓာတ်တွေက အောက်တန်းကျလွန်း
တကယ့်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကျူးးး ဖြစ်နေရတာ
ဘယ်သူ့ ကိုအပြစ်ပြောရမလဲ တို့ နိုင်ငံမှာ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေက
တယုတ် နဲ့ ကုလားး တွေနေဖို့ အတွက်လားးး
စားစရာမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသား ကျူး တွေ အတွက် စံနမူနာ ယူစရာ ထိပ်ခေါင် ကျူး များ ရှိနေတာ မို
အရီးရေ သူတို့ကကျူးစာရင်းမ၀င်ပါ
ကျူးအဆင့်ကျော်သွားပြီ
သူကြီးရေအဲဒီဥပဒေကလည်းကိုနီပြောတဲ့ ၂ မျိုးထဲဆိုတာကခက်တယ်ထင်ပါရဲ့
အဲဒီ”အားနာပါတယ်”…ဆိုတဲ့ ဗမာတွေစိတ်ထဲက”ကျူး”ကို.. အရင်ရှင်းကြ.
ဟုတ်တယ် ကျူးရောက်တယ်ဆိုသက်ဆိုင်ရာတခါတည်းတိုင်
ခု ပြောကြတယ်… ဘယ်ဘက်မှာတော့ ဘယ်နှစ်ပေ ဘယ်နှစ်ပေကို အိမ်အပါ ဆယ်သိန်းပဲ ရှိတယ်.. ရှစ်သိန်းပဲ​ ရှိတယ်နဲ့… မဝယ်ဘူးလို့​ ပြောလိုက်တယ်… တော်ကြာ ကိုယ်ပါ ကျူးဖြစ်နေဦးမယ်…
အဲသလို ကျူး မြေကို ၀ယ်လို့ ဆုံးတဲ့သူကလည်းဆုံး၊ပွပေါက်တိုးတဲ့သူကလည်း တိုး ဆိုတော့..
.နိုးဝမ်း အဘ သည်လော ပါ လို့။
အခုတောင် ကြားခဲ့သေး မေမြို့ ဘက် မှာ တောင် တစ်ခု လုံး ကို ဝယ်ထားတယ် ဆိုလား။
ဂရန်မရှိ ဘာမရှိ၊ ရွာက လူ တွေ က သဘောတူပြီး ရောင်းတာတဲ့။ ရွှေပြည်ထဲ လောဘသားကောင် တွေ ကလဲ အများသား။
အဘ သည် လောကဒီခေတ်မှာမှန်ကန်တဲ့လောပဲပြောရမယ်padomar ရေ
လူလည်ကျူးတွေရဲ့ အသံကိုလည်း နားထောင်ကြည့်အုံးလေ။
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
သူတို့မရှိလို့ မ၀ယ်နိုင်ပေမယ့် နေသူမရှိ လွတ်နေတဲ့မြေမှာ နေခွင့်ရှိတယ်တဲ့။
အန်ကယ်ကြီးပြောတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာ နေ့ချင်းညချင်းကျူးတဲတွေ ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စမှာ ကျူးအချင်းချင်း တုတ်တပျက် ဓားတပျက်ဖြစ်သွားတာတွေတောင်ပါသေးးး
မင်္ဂလာဒုံကနေ ထောက်ကြန့်ကြား မိုင်ပေါင်းများစွာ အကျယ် မြေကွက်ကြီး
ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတယ်
ကျူးကျော်ရင် သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်လို့တောင် နံရံမှာ ရေးကပ်ထားတယ်
သတ္တိကောင်းတဲ့ ကျူးတွေ အဲ့နား စုပြီး သွေးတိုး စမ်းကြည့်ကြရင်
ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်း တောနက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ အဲ့မြေနေရာ ကျယ်ကြီးကို
ဒီအစိုးရ.. လုပ်သင့်တာကို.. မလုပ်တတ်လုပ်တတ်လုပ်တာနဲ့.. ပြသနာတွေဖြစ်ကုန်တာလို့…ထင်တယ်..။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ.. ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက..တိုင်းပြည်ရဲ့..ပြည်နယ်တွေရဲ့.. အချက်အချာနေရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်..။
ဒါမှ.. ပြည်နယ်တွေကခွဲထွက်ခွင့်ရှိပေမယ့်(ရှိပေမယ့်) ခွဲထွက်လို့မရပဲဖြစ်နေတာပါ..။
ဒီလိုဖြစ်ဖို့.. အစိုးရက.. အရေးကြီးတဲ့မြေတွေ.. လမ်းတွေကို..ဖယ်ဒရယ်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းထားရသဗျ..။
အဲလိုလုပ်ထားလို့.. အမေရိကမှာ.. ပြည်နယ်တွေခွဲထွက်မယ်လုပ်တိုင်း.. ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက.. ဟေ့..ခွဲထွက်လိုက်စမ်းပါလို့.. ပြောရဲတာပေါ့..။
ဒီမိုကရေစီစနစ်လိုပဲ..။ လွတ်လပ်တယ်ဆိုပြီး.. လုပ်ချင်တာလုပ်ကြည့်စမ်းပါ..။
ယခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လယ်ယာမဲ့များအတွက် လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရန် ကျပ်သန်း ၅၀၀ နှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ရန် ကျပ်သန်း ၂၀၀၀၀ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိ
ယခု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လယ်ယာမဲ့များအတွက် လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရန် ကျပ်သန်း ၅၀၀ နှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျပ်သန်း ၂၀၀၀၀ အား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေရသုံး စာရင်းအရ သိရသည်။
.ကျူးဆို ဘာကျူးမှမကောင်းဘူးဗျာ..ဦးပါပြောသလိုပဲ